Paul Krugman မှဘာသာပြန်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ။ သူသည်သူနှင့်သူ၏သီအိုရီအရမည်သူသည်အကောင်းဆုံးစကားစု ၈၀ ဖြစ်သည် စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး
Claudi casals | 21/07/2021 17:45 | အထွေထွေစီးပွားရေး
အတွေးအခေါ်များကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်, ကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ချက်များနှင့်အမြင်များကိုသိရန်အမြဲအကြံပြုလိုတယ်။ အထူးသဖြင့်ဘဏ္ofာရေးလောကတွင်အကျော်ကြားဆုံးစီးပွားရေးပညာရှင်များ၊ သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များ၊ သီအိုရီများနှင့်နည်းစနစ်များကိုအနည်းငယ်သိရန်အကြံပြုလိုသည်။ ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးနိုဘယ်လ်ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သောပေါလ်ခရူဂမ်၏စကားစုများသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ဒီကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်ကစီးပွားရေးကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သောလူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအချက်များကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းဝေဖန်သည်။ Paul Krugman ရဲ့အထင်ရှားဆုံးသောစာပိုဒ်တိုများဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။ ထို့အပြင်သူသည်သူတီထွင်ခဲ့သောကုန်သွယ်ရေးသီအိုရီနှင့်လည်းပြောဆိုလိမ့်မည် တစ်ခုလုံးကိုတော်လှန်ရေးထင်။
1 Paul Krugman ၏အကောင်းဆုံးစကားစု ၈၀
2 Paul Robin Krugman ကဘယ်သူလဲ။
3 Paul Krugman ရဲ့သီအိုရီကဘာလဲ။
Paul Krugman ၏အကောင်းဆုံးစကားစု ၈၀
Paul Krugman ၏စကားစုများသည်အထူးသဖြင့်ထင်ရှားသည် ယဉ်ကျေးမှုဂုဏ်သိက္ခာကင်းမဲ့မှုနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောလူ ဦး ရေမှသာရရှိသည့်အားသာချက်များကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်မှုများကြောင့် ထိုကဲ့သို့သောတက္ကသိုလ်များကိုဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ်နိမ့်အခွန်အဖြစ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့သူ့ရဲ့အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးစကားစု ၈၀ ကိုကြည့်ကြရအောင်။
ခြားနားဥာဏ်ရည်ရှိသည့်လုံခြုံမှုကင်းမဲ့သောအယူခံဝင်မှုသည်ထင်ရသည်ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့စီးပွားရေးဟာလူနေမှုဘဝကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကထင်မြင်ချက်ပေးချင်ကြတယ်။ "
ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဖုတ်ကောင်မှာချမ်းသာသူများအပေါ်အခွန်လျှော့ချခြင်းသည်စီးပွားရေးကိုကြီးထွားစေပြီးလူ ဦး ရေတစ်ခုလုံးသို့ပျံ့နှံ့သွားသောစည်းစိမ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည်။
“ ဒီစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ခြင်းဟာစီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအရနဲ့ပညာရှင်ဆန်ဆန်ခေါင်းမာတဲ့စီးပွားရေးအယူအဆတွေကိုလွှမ်းမိုးထားသူတွေအားလုံး မှလွဲ၍ အားလုံးနီးပါးကိုစိတ်ချမ်းသာစေမယ့်အတွေ့အကြုံပါ။ ”
ဥပမာအားဖြင့်၊ အထက်တန်းလွှာတက္ကသိုလ်များမှာပင် ၀ င်ခွင့်စံသတ်မှတ်ချက်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်ဟုလူအများကပြောကြသည်။
“ ငွေကြေးချဲ့ထွင်မှုသည်ထိရောက်မှုမရှိသောအခါဘဏ္loanာရေးချဲ့ထွင်မှုဖြစ်သည့်ချေးငွေဖြင့်ပံ့ပိုးထားသောအများပြည်သူဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကဲ့သို့နေရာယူရမည်။ ဤသို့သောဘဏ္fiscalာရေးတိုးချဲ့မှုသည်အသုံးစရိတ်နည်းခြင်းနှင့် ၀ င်ငွေနည်းခြင်းတို့၏သံသရာကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
သို့သော်ဤအချက်သည်ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက်မူဝါဒအရမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ ၎င်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ငွေကြေးပေါ်လစီ၏တန်ပြန်ဆေးကုထုံးပျက်ကွက်မှသာသတ်မှတ်ထားသောအန္တရာယ်ရှိသောမူးယစ်ဆေးဖြစ်သည်။ " - လူမှုရေးအကူအညီများတွင်။
ဘယ်သူ့အမှားကကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးအနက်ဆွေးနွေးတာကိုငါမှတ်ယူခဲ့ပြီးပြီလဲအစားထိုးတာအတွက် ပေါ့ပ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ? »
အဘယ်ကြောင့်ဥရောပက၎င်း၏အကျပ်အတည်းအပေါ်ဆိုးဆိုးရွားရွားတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ ငါအဖြေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုမှတ်သားပြီးပြီဖြစ်သည်။ တိုက်ကြီးခေါင်းဆောင်များသည်ဤဇာတ်လမ်းကို Hellenize လုပ်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပုံရပြီးဂရိများသာမကအခက်အခဲများကိုဖြတ်သန်းသွားသောသူများသည်ဘဏ္fiscalာရေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုကင်းမဲ့မှုကြောင့်ထိုနေရာသို့ရောက်ရှိလာသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်နှစ်ဆယ်ကဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကို ၀ င်ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။
"မုန်တိုင်းထန်သည့်အချိန်တွင်သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့အားပြောနိုင်သမျှသည်မုန်တိုင်းဖြတ်သန်းသွားသောအခါရေပြန်ကျသွားသည်ဆိုပါကစီးပွားရေးပညာရှင်များသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးအသုံးမ ၀ င်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေကြသည်။ "
ထို့အပြင် pop internationalists များပြောသည့်စကားကိုမကြာခဏနှစ်သက်လေ့ရှိသောအယ်ဒီတာများ၏အခန်းကဏ္ national သည်နိုင်ငံ၏အကောင့်များဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးဟန်ချက်သည်ချွေတာခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတို့အကြားကွာခြားမှုကိုနားလည်နိုင်သောအလွန်ခက်ခဲသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုလျစ်လျူမရှုသင့်ပါ။ »
ဘဏ္financialာရေးအကျပ်အတည်း၏အစတွင် pranksters ကပြောကြားခဲ့သည်မှာတရုတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်မျှတပြီးမျှတမှုရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့ကငါတို့ကိုအဆိပ်သင့်ကစားစရာများနှင့်ညစ်ညမ်းနေသောငါးများကိုရောင်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
“ ချမ်းသာတဲ့သူတွေကလူတွေကိုတစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အခွန်လျှော့ချတာကကောင်းတယ်လို့လူတွေကိုယုံကြည်အောင်ငွေအမြောက်အများသုံးတယ်။ ”
«အမေရိကန် Prospect သူတို့ကတူညီတဲ့ပေါ့ပ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝါဒီများ၊ သူတို့ကသူတို့ရဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေကိုဉာဏ်ရည်ဆန့်ကျင်ရေးခရူးဆိတ်စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပလက်ဖောင်းတွေအဖြစ်တမင်တကာအသုံးပြုတယ်။ "
စီးပွားရေးကိုကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအလုပ်အဖြစ်ဖော်ပြသော်လည်းအခြားလှည့်ကွက်တစ်ခုနှင့်သာတွေ့ရသည်။ အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းနည်းမိသည့်အပြစ်များသည်ဘယ်သောအခါမျှဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။
"နိုင်ငံရေးအခြေအနေက ၀ င်ငွေဖြန့်ဖြူးဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ "
“ မဟာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ပြproblemsနာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်သာဖြေရှင်းပြီးပါပြီ။ ငါတို့သင်ခန်းစာမသင်ရသေးဘူး "
အဘယ်ကြောင့်မူဝါဒဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာအလုပ်ငါ့သုတေသနနှင့်ဆန့်ကျင်ပုံရသည်မဟုတ်လော စစ်မှန်သော? ငါထင်တာကတော့ငါ့ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးအလုပ်မှာငါသုံးခဲ့တဲ့နည်းအတိုင်းနီးပါးကိုသုံးပြီးမူဝါဒပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်။
"သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မအောင်မြင်လျှင်, ထပ်ခါတလဲလဲကြိုးစားပါ။ "
အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ၀ ယ်လိုအားကိုလက်ခံရန်များစွာတွန့်ဆုတ်ကြသည်။ လကုန်သည့်အချိန်တွင် ၀ င်ငွေရရှိမှုထက် ၅ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းသွားသည်။ သူတို့၏ ၀ ယ်ယူနိုင်စွမ်းမှာယိုယွင်းပျက်စီးသွားသည်ဟုမဆိုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု။ "
"ရည်မှန်းချက်ကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်တဲ့လူ ဦး ရေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒတွေရဲ့ဘဏ္shareာငွေကိုသူတို့ဝေမျှဖို့သာဖြစ်တယ်။ "
“ မနက်ဖြန်ပြိုကျမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးပြန်လည်အသက်ဝင်လာအောင်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေကအားနည်းလာလိမ့်မယ်။ ”
“ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်အချမ်းသာဆုံး ၅ ရာခိုင်နှုန်းအတွက်အခွင့်ထူးခံနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းသောလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ငါတို့အထက်တန်းလွှာတွေကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံတယ်။ "
“ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလွှမ်းခြုံမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည့် ဦး စားပေးဖြစ်ပြီးရှေ့သို့တိုးတက်ရန်ကြီးမားသောခြေလှမ်းတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
"နိမ့်ဆုံးလုပ်အားခတိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းသည်အကန့်အသတ်တစ်ခုအထိအလုပ်လက်မဲ့ ဦး ရေပိုများစေသည်ဟုသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားမရှိပါ။ "
«ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုရှိတယ် ဆည်းဆာဇုန် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဂြိုလ်သားများကျူးကျော် ၀ င်ရောက်မှုကိုပြုလုပ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီတစ်ကြိမ်တော့မလိုအပ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကဘဏ္fiscalာရေးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတချို့ရဖို့ပါ။
“ ယာယီအဝိဇ္ဇာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၊ အချိန်ကာလအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှာခေါင်းအောက်ရှိအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမမြင်နိုင်သောကြောင့်တိုးတက်မှု၏စျေးနှုန်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာ၏ရှုပ်ထွေး။ "
“ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ၀ ယ်ခွင့်ပေးတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းရှိတယ်၊ သူတို့ရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုပါပံ့ပိုးတဲ့သူတွေကဖြစ်စေ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကနေဖြစ်စေ။
“ တကယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်မှာအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဥပမာ၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုအားလုံးနီးပါးဟာဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းမှတစ်ဆင့်ထုတ်လုပ်မှုမှတစ်ဆင့်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ဖူလုံရေးအတွက်ကြိုးစားတာထက်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်အတွက်ပဲ။ "
နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်များ၊ လူမှုဗေဒပညာရှင်များသည်ကျွန်ုပ်တွင်အနည်းဆုံးသိပ္ပံဝတ္ထုအချို့ကိုစိတ်ဝင်စားသောသူငယ်ချင်းများရှိသည်။ "
“ အခွန်ဖြတ်တောက်မှုကသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့သူတို့အတွက်ပေးဆပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုရင်လူတွေကိုရိုးသားမှုမရှိဘူး။ ”
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုအချိန်နှင့်အမျှတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းသည်အလုပ်သမားတစ် ဦး ချင်း၏ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းအပေါ်လုံးဝမူတည်သည်။
“ စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်ဗဟိုဘဏ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ဖို့လိုတယ်၊ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက်အားဖြည့်ပေးရန်မိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုတိုးမြှင့်ရမည်။ "
အများအားဖြင့်အားလုံးနီးပါးနီးပါးဖြစ်သည့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများသည်ပိုမိုမှုန်ဝါးပြီးဖော်ထုတ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်။
“ ဘဏ္systemာရေးစနစ်ကိုလေးလေးနက်နက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လုပ်နိုင်မယ့်စွမ်းအားရှိသလား။ မရရှိလျှင်, လက်ရှိအကျပ်အတည်းတိကျတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ဒါပေမယ့်အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များကိုလိုက်နာလိမ့်မည်ပုံစံ။ "
နိုင်ငံရေးသမားများသည်ရာထူးအချို့ကိုရရှိခြင်းအတွက်ဆုချခြင်းခံရသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းအားသူတို့ကို ပိုမို၍ ပြင်းထန်စွာခုခံကာကွယ်စေပြီး၎င်းတို့ကိုသူတို့အမှန်တကယ်မ ၀ ယ်ခဲ့ဟုပင်ယုံကြည်စိတ်ချစေသည်။
ဒီမိုကရေစီ၊ လူထုလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုငါယုံကြည်တယ်။ အဲဒါကကျွန်မကိုလစ်ဘရယ်ဖြစ်စေပြီးအဲဒါကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ”
ဒါပေမယ့်ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာကငါ့ကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေဆဲ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောပြည်နယ်ဖြစ်သောစီးပွားရေးသည်နိုင်ငံအများစုထက်ပိုမိုကြီးမားပြီးတိုင်းပြည်သည်အလွယ်တကူငှက်ပျောသီးသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုမည်သူထင်မြင်မည်နည်း။ "
အမှန်တရားကိုရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းအားသီလဟုဆိုခြင်းသည်အများပြည်သူဘ ၀ မှပျောက်ကွယ်သွားသည်ဟုထင်ရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခများ၏မူလအစသည်စကြာ ၀ theာ၏အစဉ်အလာတွင်အသေးအဖွဲမျှသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အာဏာကိုရာထူးများ၌အမှန်တရားကိုနားလည်သဘောပေါက်သောလူများအလုံအလောက်ရှိပါကအလွယ်တကူအလွယ်တကူပြုပြင်နိုင်သည်
“ ဘယ်သူမှလုံးဝမရိုးသားပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခုငါတို့ခံစားနေရတဲ့လိမ်လည်လှည့်စားတဲ့ပင်လယ်ပြင်ဟာအသစ်အဆန်းတစ်ခုပါ။ ”
"ဒီအာမခံချက်ကလူငယ်တွေ၊ လူငယ်တွေပဲ။ "
«နည်းပညာကငါတို့သူငယ်ချင်းဖြစ်တယ်။ ငါတို့မှာလက်လှမ်းမမီနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ထုတ်လွှတ်မှုနိမ့်ကျတယ်။ "
Paul Robin Krugman ကဘယ်သူလဲ။
Paul Krugman ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုအခုသိပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြပါရစေ။ ၎င်းသည် ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင်အယ်လ်ဘာနီတွင်မွေးဖွားခဲ့သောအမေရိကန်စီးပွားရေးပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ယေးလ်တက္ကသိုလ်မှစီးပွားရေးဘာသာရပ်ဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးမက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ MIT မှစီးပွားရေးဘာသာရပ်ဖြင့်ပါရဂူဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ သူ၏လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပတ်သက်၍ Krugman သည် Princeton တက္ကသိုလ်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်တော်တော်များများတွင်ဆရာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤကျော်ကြားစီးပွားရေးပညာရှင် အထူးသဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စီးပွားရေးနိုဘယ်လ်ဆုရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤလမ်းကြောင်းသည် Paul Krugman ၏စကားစုများသည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်သင်ယူခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။
Paul Krugman ရဲ့သီအိုရီကဘာလဲ။
Paul Krugman ၏စကားစုများသည်ကျော်ကြားရုံသာမကသူ၏ကုန်သွယ်ရေးသီအိုရီလည်းပါသည်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ Heckscher နှင့် Ohlin တို့သည်ကွဲပြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအကြားကုန်သွယ်ရေးကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြပြီး Krugman သည်စက်မှုလက်မှုကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်သီအိုရီတစ်ခုကိုအဆိုပြုခဲ့သည်။ ဒါကဒီစီးပွားရေးပညာရှင်အဆိုအရ ၎င်းသည်စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့်တူညီသောထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတူသောနိုင်ငံများအကြားနိုင်ငံတကာတွင်ကုန်သွယ်သည်။
အစပိုင်းတွင်ကုန်သွယ်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်နိုင်ငံအသီးသီးရှိထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များဖြန့်ဝေသည့်နည်းလမ်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အလုပ်သမား၊ မြေနှင့်အရင်းအနှီးဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုသည်တောင်ဘက်နှင့်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံများအကြားလဲလှယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်လူတိုင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုသည်ပိုမိုထိရောက်သောထုတ်ကုန်များတွင်အထူးပြုသည့်နိုင်ငံများဖြစ်သည်။
မီလ်တန် Friedman ကိုးကား
သို့သော် Paul Krugman သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးကိုတူညီသောထုတ်ကုန်များဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုပြသခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် ဖလှယ်မှုများသည်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင်သာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤအခြိနျမှစ။ Paul Krugman ကတီထွင် "ကုန်သွယ်မှုသီအိုရီအသစ်" ဟုခေါ်ကြသည်။ သူ၏အဆိုအရစက်မှုလက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံများနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုမှအမှန်တကယ်အကျိုးခံစားရသူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤစီးပွားရေးပညာရှင်သည်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုသည်အထွေထွေသက်သာချောင်ချိရေးကိုတိုးမြှင့်သည်ဟူသောအစဉ်အလာအယူအဆကိုငြင်းပယ်သည်။
Paul Krugman ၏စကားစုများသာမကသူ၏သီအိုရီနှင့်လည်းတွေ့နိုင်သည်မှာသူသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပြောင်ပြောင်တောက်သောဉာဏ်ရည်ရှိသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်ပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » ရှင်ပေါလု Krugman ကိုးကား